झुपडी हुँदै डिजिटल हल- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
झुपडी हुँदै डिजिटल हल
पानी चुहिने हलमा बोरामाथि पलेँटी कसेर फिल्म हेर्ने रुपन्देहीवासी अहिले डिजिटल हलमा सुतेर हेर्छन्
फाल्गुन १५, २०७६ सन्जु पौडेल
बुटवल — बुटवल उपमहानगरपालिका ११ का ५५ वर्षीय विक्रम गलामीले पाँच जना साथीसित मिलन चलचित्र मन्दिरमा पहिलोपटक हिन्दी चलचित्र ‘बोर्डर’ हेरेका थिए । त्यसपछि भने उनी हल पसेका छैनन् ।
‘२०५४ मा त्यो फिल्म हेर्दा दर्शक खचाखच थिए,’ उनले भने, ‘अहिलेका हल कस्ता छन्, देखेकै छैन ।’ लामो समय भारतमा बसेकाले नेपाली सिनेमाघरको तुलनामा भारतीय स्तरीय लाग्ने गरेको उनले सुनाए । त्यसबेला नेपाली हलमा बिजुली काटिएपछि अँध्यारो हुन्थ्यो । पुनः बत्ती आएपछि फिल्म हेरेको उनको सम्झना छ । ‘एक्लै गइन्थेन,’ उनले भने, ‘साथीभाइ जाँदा अँध्यारोमा चिच्याइन्थ्यो ।’ अहिले शनिबारबाहेक हल खाली देख्ने गरेको उनले बताए । कतिपयले युट्युब र टेलिभिजनमै मन परेको चलचित्र हेर्ने गरेकाले हलसम्म नआउने उनको बुझाइ छ ।
तिलोत्तमाका नारायण काफ्ले फिल्म भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे । ‘नयाँ चलचित्र लागेको दिन साइकलमा कुदिहाल्थें,’ उनले भने, ‘बुटवलको हाटबजार छेउमा झुपडीमा चलचित्र देखाइन्थ्यो ।’ उनका अनुसार तपतप पानी चुहिए पनि चलचित्र रोकिन्थेन । त्यसबेला भुइँमा बोरा बिछ्याएर र बेन्चमा बसेर हेर्ने गरेको उनले सुनाए । उनका अनुसार त्यसबेला र अहिलेका हलको अवस्थामा आकाश जमिनको फरक छ । ४४ वर्षअघि फस्ट क्लासमा बसेर चलचित्र हेर्दा १ रुपैयाँ, मध्यममा ७५ पैसा र अन्तिममा ५० पैसा तिरेर हेर्न पाइने उनले बताए । उनले ‘कान्छी’, ‘माइतीघर’ जस्ता नेपाली चलचित्र हेरेको बताए । बुटवलका महेश्वरगोपाल लाकोलले पहिलो चलचित्र मन्दिर (हल) स्थापना गरेका थिए । त्यसबेला बटौली (पारि बुटवल) स्थित आफ्नै घरमा हल खोलेर मिलन प्रकाश चलचित्र मन्दिर सञ्चालन गरेका थिए । उक्त हल २०३१ सालसम्म सञ्चालन भएको उनका भाइ कमलले बताए ।
बटौलीको हल बन्द भएपछि ४२ वर्षअघि सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३, खजहनामा पञ्चरत्न चलचित्र मन्दिर सञ्चालनमा आएको स्थानीय रवि पन्तले बताए । ‘विद्यालय पढ्दा त्यहीं फिल्म हेर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘त्यो हल बन्द भएको २५ वर्ष भयो ।’ त्यसबेला चलचित्र उत्पादन कमै हुन्थे । भारतबाट नयाँ चलचित्र आउन समय लाग्ने भएकाले यहाँका मानिस साइकल चढेर नौतनवा, गोरखपुरसम्म जाने गरेको उनले बताए ।
२०३५/३६ मा बुटवलका द्वारिका उदयले घुम्ती चलचित्र हल सुरु गरे । द्वारिकाका छोरा प्रदीपले राजेश टुरिङ नाम दिइएको हललाई विभिन्न स्थानमा पुर्‍याएर चलचित्र प्रदर्शन गरिन्थ्यो । ‘एउटै नाममा लामो समय चलाउन नपाइने भएपछि ०३९ बाट लक्ष्मी टुरिङ नाम राखेर चलायौं,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला मेला, बजार र गाउँमा चलचित्र देखाउने चलन थियो ।’ त्यसबेला नौ वर्षका प्रदीपले बुबाकै मोवाइल हलमा चलचित्र हेरेको बताए । लामो समय घुम्ती हल सञ्चालन गरेपछि द्वारिकाले ०४३ मा बुटवल चलचित्र मन्दिर स्थापना गरेका थिए । त्यसबेला प्रदीपका दाइ राजकुमारले बुबासँगै हल हेर्थे । अध्ययन गरिरहेका प्रदीपले सघाउन थाले । उक्त हलमा १ हजार ७३ जना अट्ने क्षमता थियो । बुटवलवरिपरिका गाउँबाटै पनि मानिस बस चढेर फिल्म हेर्ने आउने गरेको प्रदीपले सम्झिए । त्यतिबेला एक करोड रुपैयाँ लगानीमा बुटवल चलचित्र मन्दिर खोलेपछि कपिलवस्तुको कृष्णनगर र नवलपरासीको सुनवलमा पनि उदयकै लगानीमा हल सञ्चालनमा आएका थिए । तर, द्वन्द्वकालको सुरुवातपछि हलमा मान्छे आउन कम भयो । कपिलवस्तु र सुनवलको हल बेचेर बुटवलको मात्र चलाएको प्रदीपले सुनाए । कान्छा छोरा प्रदीपले ०७३ सालबाट पुनः चलचित्र मन्दिरमा लगानी गरे । टुके प्रोजेक्टर, सराउन्डिङ साउन्ड, एसी, लक्जरियस सिट रहेको हलमा बुधबार द्वारिका डे स्वरूप १ सय ५० रुपैयाँ मात्र टिकट शुल्क लाग्छ । अन्य बेला २ सय ५० रुपैयाँ पर्छ ।
चलचित्र मन्दिर धमाधम खुल्न र सञ्चालनमा आउन थालेपछि एकै ठाउँमा रहेको जनसंख्या हेरेर मात्र चलचित्र हल खोल्ने प्रावधान गराउनुपर्ने उदयको मत छ । ‘भाषाभाषी संरक्षणका लागि बनेका चलचित्रलाई द्वारिका उदयमा न्यून शुल्क लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले जातजाति र भाषासँग सम्बन्धित सबैलाई त्यस्ता चलचित्र उत्पादन गर्न पनि उनले सुझाएका छन् । सिद्धार्थनगरकी कल्पना सिंखडाले ‘कालीदास’ चलचित्र हेर्न हल जाँदा हलको बनावट उनलाई सामान्य लाग्थ्यो । थोत्रा कुर्सी, छिर्नेबित्तिकै ठुस्स गनाउने दुर्गन्धित हलमा कोच्चिएर फिल्म हेर्नुपर्थ्यो । ‘हलभित्र असभ्य भाषा प्रयोग हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘परिवारसँग चलचित्र हेर्न जाने वातावरण नै थिएन ।’ अहिले उनी चलचित्र ‘आमा’ हेर्न गएको द्वारिका उदय सिनेमा हल सोचेभन्दा बेग्लै पाएको बताइन् ।
२०४१ मा बुटवलको राजमार्ग चौराहामा सञ्चालनमा आएको कालिका चलचित्र मन्दिर अहिले पनि चलिरहेको छ । हरिप्रसाद दुवाले त्यसबेला यहाँका मानिस चलचित्र हेर्न गोरखपुरसम्म जाने गरेको देखेर सिनेमा हल खोले चल्छ भन्ने लागेर लगानी गरेको उनका छोरा कपिल दुवाले बताए । त्यसै बेला मिलन चलचित्र मन्दिर पनि बुटवलको मिलनचोकमा सञ्चालनमा आएको थियो । उक्त चलचित्र मन्दिर पनि अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।
रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा मनोरन्जनको माध्यम बन्न ०५८ सालमा खुलेको पद्मश्री चलचित्र मन्दिरमा अहिले दर्शकको चाप खस्केको छ । यसका सञ्चालक राजु पौडेलले प्रविधिको विकासले सञ्चार क्षेत्रले फड्को मार्दा चलचित्र हातहातमा पुग्ने गरेको बताए । कासीपछि बुटवलमा डिजिटल माध्यमको पहिलो भयु सिनेमा हल सुरु भयो । अमरपथस्थित सिंह कम्प्लेक्समा सञ्चालित हलले दर्शकको आकर्षण राम्रै बटुल्यो । सिद्धार्थनगरमा सञ्चालित कासी सिने प्लेक्स आउँदो चैतमा ६ वर्ष पुग्दैछ । मोफसलकै पहिलो मल्टिप्लेक्सका रूपमा स्थापित यस सिनेमा घरमा ढाइ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको सञ्चालक ओम जैशीले बताए ।
त्यस्तै देशैभरि शाखा विस्तारमा लागिरहेको क्यूएफएक्स सिनेमाजको मल्टिप्लेक्स हल बुटवलमा खुलेपछि दर्शकको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । ‘सुतेरै चलचित्र हेर्न पाइने भएपछि बरु अलि महँगै भए पनि केही हुँदैन,’ क्यूएफएक्सबाट चलचित्र हेरेर फर्किएका प्रकाश मल्ल ठकुरीले भने, ‘यस्तो हल भयो भने बच्चाबच्चीलाई र वृद्धवृद्धालाई अझै गज्जब ।’ उनले यो हल सञ्चालनमा आएदेखि अन्यमा चलचित्र नहेरेको बताए । चलचित्रको पर्दाबाट पात्र आँखैअगाडि आएजस्तो हुने, जताबाट सुने पनि क्लियर आवाजले यसप्रति लोभ्याएको उनले सुनाए ।
गत मंसिरबाट बुटवलको भाटभटेनीमा सञ्चालनमा आएको क्यूएफएक्सले नयाँ प्रविधिबाट मानिसलाई चलचित्र हेर्ने वातावरण मिलाएको क्यूएफएक्सका अप्रेसन म्यानेजर सुशील मानन्धरले बताए । बुटवलमा क्यूएफएक्सका दुइटा पर्दा सञ्चालनमा छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:२४
कांग्रेस महामन्त्री कोइराला भन्छन्- ‘अब शेरबहादुरजीलाई रोक्छु’
‘कांग्रेस कोइरालाहरूको मात्रै बपौती हो र ?’
फाल्गुन १५, २०७६ कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौँ — कांग्रेसको गैरसंस्थापन पक्षमा सभापतिको प्रत्याशी को हुने भन्ने दौडधुप चलिरहेका बेला महामन्त्री शशांक कोइरालाले फागुन १ गते उत्तरप्रदेश, भारतका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग गरेको भेटवार्ता अहिले चर्चामा छ । कोइरालाको उक्त भेटलाई पार्टीको आसन्न महाधिवेशन र ‘हिन्दु राज्य’ को मुद्दासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
केही समयअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिल्ली पुगेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भारतीय जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्ष एवं रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटेका थिए । जसको चर्चा नसेलाउँदै कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासपात्र आदित्यनाथलाई भेटेका हुन् ।
कोइराला इन्डिया फाउन्डेसन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल–भारत च्याम्बर अफ कमर्स इन्डस्ट्रीले संयुक्त रूपमा माघ २९ देखि फागुन १ सम्म आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन उत्तरप्रदेश पुगेका थिए । आयोजकले योगी सहभागी हुने कार्यक्रममा कांग्रेसबाट महामन्त्री कोइराला र केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाललाई बोलाएका थिए । नेपाल र भारतबीचको बहुपक्षीय विषयमा भएको संवाद कार्यक्रममा अन्य राजनीतिक दलका नेतासमेत आमन्त्रित थिए ।
कांग्रेस नेता रिजालका अनुसार कोइराला र योगीसँगको भेटवार्ता छुट्टै भएको थियो । उनीहरूबीचको भेट औपचारिकतामा मात्रै सीमित थिएन । पार्टीको आसन्न महाधिवेशन र नेपालको पछिल्ला घटनाक्रममाथि खुलेरै कुराकानी भएको थियो । भारतसँग कोइरालाहरूको पुरानो सम्बन्ध र बीपीकै छोरा भएका कारण पनि योगीले कोइरालासँगको भेटलाई बढी महत्त्व दिएको रिजालको बुझाइ छ ।
नेपालमा हिन्दु राज्य स्थापना हुनुपर्छ भन्ने भनाइ बेलाबखत सार्वजनिक रूपमै प्रकट गर्दै आएका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग कोइरालाको भेटलाई पार्टीकै कतिपय नेताहरूले महाधिवेशनभन्दा पनि धर्मसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । कोइराला भने धर्मबारे कुराकानी नै नभएको दाबी गर्छन् । ‘पार्टीको महाधिवेशन र सरकारका विषयमा कुराकानी भयो । धर्मका बारेमा कुराकानी नै भएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘धेरैजसो त पार्टीको आसन्न महाधिवेशनकै बारेमा उनीहरूको पनि चासो देखियो । हाम्रो कुराकानी पनि त्यसैमा बढी केन्द्रित भयो ।’
धर्मबारे आफ्नो दृष्टिकोणमा कुनै हेरफेर नभएको भने उनले बताए । ‘धर्म निरपेक्षता हटाउनै पर्छ, अहिले पनि मेरो धारणा त्यही हो । तर दुई तिहाइको समर्थन अर्कोतिर छ । अहिल्यै हट्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘धर्मसापेक्ष र निरपेक्ष दुवै हुनु हुन्न, स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु ।’ ...
कोइराला कार्यकर्ताको कुरा सुन्छन्, प्रतिक्रिया दिनुपर्ने भए मात्रै एक/दुई वाक्य बोल्छन् । नत्र मुसुक्क हाँसेर टारिदिन्छन् । आफ्नै बारेमा जति कटु आलोचना गरे पनि त्यसको प्रतिक्रिया उनको हाँसो हुन्छ । कसैलाई बिझाउँदैनन् ।
संसद्मै कोइरालाले दुई वर्षमा दुई पटक मात्रै बोलेका छन्, एकपटक सभामुख निर्वाचित भएपछि कृष्णबहादुर महरालाई बधाई दिने क्रममा र अर्कोपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमै उनी हतपत बोल्दैनन् । उनको भूमिकासमेत अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हरेक गल्तीमा साक्षी बनेको आरोप शशांकलाई आफ्नै समूहबाट समेत लाग्दै आएको छ । पार्टीभित्र उनको सबैभन्दा ठूलो पुँजी बीपीको विरासत हो ।
तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला त्यस्तै नबोल्ने नेतामा पर्थे । उनलाई संसद्मा ‘ब्याकबेन्चर’ भनिन्थ्यो । संसद् प्रवेशको सुरुवाती कालखण्डमा उनी पछिल्लो बेन्चमा बस्थे । जिब्रोको क्यान्सरका कारण उनको बोली पनि स्पष्ट थिएन । बोली स्पष्ट भए पनि शशांक भने आमसभामै दुई, तीन मिनेटभन्दा बढी बोल्दैनन् । संसद्को नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दा उनले जम्मा एक मिनेट बोलेका थिए । पार्टी पदाधिकारी हुनुअघि उनी पनि संसद्को पछिल्लो बेन्चमा हुन्थे ।
पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका शशांक आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्ने तयारीमा छन् । एक वर्षअघि विराटनगरबाट उनले उम्मेदवारी घोषणासमेत गरेका थिए । उनको घोषणालाई लिएर आन्तरिक गुटको बैठकमा आलोचना भयो । उम्मेदवार घोषणाको प्रतिस्पर्धाले पार्टी सभापति देउवालाई लाभ पुग्ने ठानेर संस्थापन इतरपक्षमा कसैले पनि सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवार घोषणा नगर्ने सहमति बन्यो ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवार हुँ नभने पनि शशांकको गतिविधि बदलिएको छ । साढे तीन वर्ष पार्टी सभापति देउवालाई सहयोग गरेका उनी ६ महिनायता सबैभन्दा बढी विरोधीका रूपमा देखिएका छन् । सार्वजनिक रूपमा देउवालाई अक्षम र पार्टी चलाउन नसक्ने नेता भनी आलोचना गरेका छन् ।
बाहिरी गतिविधि कम तर भित्रभित्रै सभापतिका लागि तयारी थालेका शशांकको भारत साइनो पनि त्यसैसँग जोडिन पुगेको छ । उनी निकट एक नेताका अनुसार योगीसँगको भेटवार्ता एजेन्डा जेजस्ता भए पनि भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नकै लागि थियो । शशांकका लागि उम्मेदवार बन्न भने परिवारभित्रै दाजु शेखरको चुनौती छ । शेखर दुई वर्षदेखि नै सभापतिको प्रत्याशीका लागि दौडधुपमा छन् । राजधानीभन्दा बाहिर जिल्लामा उनको बसाइ बढी छ । शशांक बीपी पुत्र हुन् भने शेखर बीपीका भाइ केशवका छोरा हुन् । विरासतको लाभको हिसाबले शेखरभन्दा शशांक अघि देखिन्छन् । क्रियाशीलता शेखरको बढी छ । यति हुँदाहुँदै पनि संस्थापनइतर पक्षमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुख्य दाबेदारका रूपमा छन् । उनी आफैं उम्मेदवार हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् तर शशांक र शेखरलाई मनाउनु नै पौडेललाई फलामको चिउराजस्तै छ । गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि आकांक्षी हुन् ।
शशांकले देउवा फेरि सभापति भए कांग्रेस धेरै कमजोर हुने दाबी गरे । ‘अब शेरबहादुरजीबाट पार्टी चल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘म सभापति हुने/नहुने भन्दा पनि कसरी शेरबहादुरजीलाई नेतृत्वमा आउनबाट रोक्ने भन्नेमा बढी ध्यान मेरो छ ।’
संस्थापनइतर पक्षमा जति प्रतिस्पर्धी देखिए पनि अन्तिममा एक जना मात्रै उम्मदेवार हुने दाबी शशांकले गरेका छन् । ‘एक भएन भने त फेरि पनि शेरबहादुरजीले नेतृत्व हत्याउनुहुन्छ । त्यसैले हामीबीच सल्लाह हुँदै छ,’ उनले भने ।
भारत किन जानुभएको थियो ?
सेमिनार थियो । त्यसैमा गएको हो । यूपीका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीजीसँग भेटवार्ता भयो ।
छुट्टै भेटवार्ता ?
हो भयो । हामीले कुरा राख्यौं, दुई देशका विकासका बारेमा । अहिलेको सरकारप्रति उनीहरू पनि सन्तुष्ट भएको पाइएन ।
कांग्रेसकै विषयमा कस्तो चासो रहेछ ?
आगामी महाधिवेशनका विषयमा कुराकानी भए । पार्टी सभापति शेरबहादुरजीप्रति उनीहरूको धारणा सकारात्मक भएको पाइनँ ।
तपाईं र योगीबीचको धर्मको‘कनेक्सन’लाई लिएर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ नि ?
धर्मबारे कुरा नै भएन ।
तपाईंको‘लाइन’ त हिन्दु राज्य स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हो नि, हैन ?
त्यहाँ त्यस्तो कुरा भएन तर म प्रस्ट छु, धर्म निरपेक्ष राख्न हुन्न । धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
महाधिवेशनका लागि पार्टीभित्र तपाईंको तयारी कस्तो छ ?
अब १४ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुरजीलाई नेतृत्वमा आउन नदिनका लागि म लागेको छु ।
तपाईंहरू (संस्थापनइतर पक्ष) नै विभाजित हुनुहुन्छ भने कसरी सम्भव हुन्छ ?
त्यसैका लागि मेरो ध्यान केन्द्रित छ । हामी एक भएनौं भने फेरि शेरबहादुरजीले नेतृत्व लिनुहुन्छ । त्यसैमा ध्यान दिनुपर्छ । एउटै उम्मेदवार हुने विषयमा छलफल भइरहेको छ । खालि को हुने भन्ने मात्र हो ।
तपाईं र शेखर कोइरालामध्ये एक होभन्छन् नि ?
रामचन्द्र दाइ पनि हुनुहुन्छ ।
कोइरालाले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने धारणा तपाईंहरूको हो ?
के कांग्रेस कोइरालाहरूको बपौती हो र ? त्यो त होइन नि । हामीबीच मिल्ने कुरा भइरहेको छ । समय छ ।
पार्टी सभापतिको चार वर्षको कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ ?
पार्टीलाई चारैतिर आक्रमण हुँदा समेत नेतृत्वले केही गर्न सकेन । कांग्रेसकै साथीहरू रिसाएका छन् । शेरबहादुरजीले पार्टी नै चलाउन सक्नुभएन, गति दिन सक्नुभएन । उहाँको केही भिजन नै रहनेछ ।
तपाईंहरूले सहयोग गर्दिनुभएन भन्ने छ नि ?
शेरबहादुरजीलाई मैले सधैं सहयोग गरेँ । कहिल्यै बाधक बनिनँ । चुनावमा पार्टी पराजित भयो । त्यतिबेला शेरबहादुरजीका टाउकामा मात्रै दोष हालेर हुँदैन भनेर मैले नै बचाएको हो । हामी पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा छौं भनेर बचाएको हो । त्यसपछि पनि गति लिन सक्नुभएन ।
पार्टी सभापतिसँग तपाईंको कुराकानीकत्तिको हुन्छ ?
बैठकमा मात्रै हुन्छ । पहिला जस्तो कुराकानी हुन्न ।
नेतृत्वले गल्ती गर्दा पनि तपार्इं किन मौन बस्दै आउनुभएको ?
हो, विरोध गरिनँ । मैले नै विरोध गरेको भए बाहिर पार्टी सभापति कमजोर भएको सन्देश जान्थ्यो । अब त महाधिवेशन पनि आइसकेको छ । उहाँले केही पनि गर्न
सक्नुभएन । अब त बोल्नैपर्छ भनेर बोल्न थालेको हो ।
सभापतिले कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा लैजान्छु भन्नुभएको छ नि ?
यो त सबैले भन्ने कुरा हो । फेरि शेरबहादुरजी नै सभापति बन्नुभयो भने पार्टी झनै खत्तम हुन्छ । भिजन नभएको नेताबाट पार्टी चल्दैन ।
तपाईंको भिजन के छ ?
पार्टी एक गराउने र सरकारमा लैजाने हैसियतमा पार्टीलाई पुर्‍याउने भिजन मसँग छ ।
महाधिवेशन तयारी अघि बढेको हो ?
केही बढेको छैन । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण भएको छैन । समायोजनको काम सकिएको छैन । तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका बढ्दै छ ।
किन तयारी अघि नबढेको ?
शेरबहादुरजीले चाँडै महाधिवेशन गराउन नै खोज्नुभएको छैन । कार्यकाल लम्ब्याइराख्ने र पार्टीलाई अप्ठ्यारामा पार्ने काम उहाँले गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । हामी छिटो गर्नुहोस्भन्दै दबाब दिँदै आएका छौं तर छिटो हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:०६